Bannaanbax Looga Soo Horjeeday Madaxda Federaalka Iyo Shirka Cadaado oo Ka Dhacay Degmada Iskushuban[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Bannaanbax Looga Soo Horjeeday Madaxda Federaalka Iyo Shirka Cadaado oo Ka Dhacay Degmada Iskushuban[Sawirro]
Wafdi uu hogaaminayo gudoomiye kuxigeenka gobalka Bari oo malmahan ba hawlo shaqo u joogay gobalada bariga fog ayaa manta gaaray degmada isku shuban oo katirsan gobalka Bari.
Wafdigan ayaa lagu soo dhaweeyey meel dagmada iskushuban u jirta shan kilo mitir,waxaan soo dhaweeyey mamulka degmada iskushuban markii ay soo gareen wafdiga degmada ayaa shacabku oo sita caleema qoyan ku soo dhaweenayeye areyo ay kamid yihiin dalku waa dalkiinii ku soo dhawada.
Wafdigan ujeedka ay u yimadeen ayaa ahaa xoojinta mudaharaadyo kala duwan iyo kala qaybgalka shacabka dagamada iskushuban
Oo lagaga soo horjeedo shirka ka socda magaalada Cadaado iyo iyo madaxda sare dawalad Federaalka iyo xoghaya Qaramada midoobey ee Soomaaliya Kay.
Gudoomiye kuxigeenka gobalka Bari Axmed Cali Cabdilaahi iyo wafdigii la socotay ayaa shacabka dagmada iskushuban kala qaybgalay mudaharaadka iyagoona socdaalo kal duwan ku maray wadada hal bawlaha u ah degmada iskushuban.
Waxayna wateen boorar ay ku qoran yihiin midnimada Puntlan waa mid iyo sawirada Madaxwaynha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud,Gudoomiyaha Balamaanka Jawaari iyo Key oo ay dhamaantood ay halkaa ku gubeen.
Socod dheer ka dib waxay isugu biyo shubteen xarunta Hanuuninta ee degmadada iskushuban,waxaaan halkaa kula hadlay shacabka reer isku shuban Gudoomiye kuxigeenka gobalka Bari Axmed Cali Cabdilaahi Ciro ayaa shacabka reer iskushuban u sheegay in ay meel uga soo wad jeestaan midnimadooda
Caasho Cawaale Maxamed oo ku hadlayasay magaca haweenka degmada iskushuban ayaa halkaa kahadashay Wafdiga ayaa ka dib u ambabaxay tuulada Dharoor oo hoos timaada degmada iskushuban.